IHuawei kunye neNhlonipho: Uyifihla njani inotshi kwifowuni | I-Androidsis
Uyifihla njani inotshi kwifowuni yakho yeHuawei kunye neNhlonipho
UEder Ferreño | | Huawei, Ukukopela kwe-Android
Iimpawu ezininzi kwi-Android ngoku zisebenzisa inotshi kwiifowuni zazo. Yinto ephantse yabaluleka kwiifowuni, kuwo onke amabakala, njengoko sibonile kwezi veki. Kuba nkqu Uluhlu lokufaka Iimpawu ezinje ngeHuawei kunye neNhlonipho ziyisebenzisa kwiscreen sayo. Sifumana ubungakanani obahlukileyo benotshi namhlanje, ukusuka kwiklasikhi enkudlwana kwabanye emile njengethontsi lamanzi, elumke ngakumbi.
Nangona ithandwa kakhulu, ayingabo bonke abasebenzisi abonwabileyo ngenotshi. Ingakumbi kuba ichaphazela indawo yesaziso kwiimeko ezininzi. Kwimeko apho unayo iHuawei kunye / okanye Hlonipha ifowuni, indlela yokufihla le notshi ilula kakhulu.
Iinguqulelo ezintsha ze-EMUI zazise umsebenzi ivumela ukufihla inotshi kwiifowuni. Ngale ndlela, ikhusi lefowuni liyenzeka ukuguqula kancinane imilo yalo phezulu. Ke ngoko, abasebenzisi abaneefowuni ezivela kwiimpawu ezinje ngeHuawei kunye neNhlonipho, kulula kakhulu.
Into yokuqala yokwenza kukuba faka useto lwefowuni. Ngaphakathi kuseto sifumana iindlela ezininzi, nangona kufuneka singenise icandelo elibizwa ngokuba yiScreen. Kule candelo apho kukho amacandelo ahlukeneyo avumela ukuba uqwalasele isikrini sekrini.
Kweli candelo lesikrini kufuneka siyifumane kukho ukhetho olubizwa ngokuba yiNotshi. Eli licandelo apho iifowuni zeHuawei kunye neNhlonipho kufuneka zifihle inotshi. Into eqhelekileyo kukuba kukho iindlela ezimbini ongakhetha kuzo, jonga inotshi okanye ukhetho lokuyifihla. Ke ukuba ufuna ukufihla, kuya kufuneka ukhethe olo khetho.
Yindlela elula kakhulu yokufihla le notshi kwifowuni yeHuawei neNhlonipho, akukho mfuneko yokufaka nantoni na. Ke, ukuba awuyithandi inotshi, awuyi kuba nangxaki xa usebenzisa i-smartphone yakho ngalo lonke ixesha. Nicinga ntoni malunga nenotshi?
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Tutorials » Ukukopela kwe-Android » Uyifihla njani inotshi kwifowuni yakho yeHuawei kunye neNhlonipho